အဲဒီကို ဘယ်လိုရောက်မလဲ။ Intouch Medicare Udomsuk ဌာနခွဲသို့ သွားပါ။ - intouchmedicare
ဆေးခန်းသွားနည်းပုံစံ၁ BTS အူတွမ်စုဌာန - အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း အူတွမ်စုဌာန
BTS ကလာရင် ထွက်လမ်းနံပတ် ၃ကိုထွက်ပြီး အူတွမ်စုလမ်းသွားရန်အတွက် ဘယ်ဘက်လက်ကိုသွားပြီးအူတွမ်စုလမ်းကိုသွားနိုင်ပါသည်(စုခွမ်၀စ် ၁၀၃) ရှေ့တည့်တည့်၄၀၀မီတာလာရင်ဆေးခန်းကိုဘယ်ဘက်လက်မှာတွေ့လိမ့်မည် ၊အူတွမ်စုလမ်းကနေပြီးဆေးခန်းသွားရင် ၅မိနစ်လောက်ကြာလိမ့်မည်။
1. အူတွမ်စု(Udom Suk ) BTS ဘူတာမှဆင်းပါ
2. ထွက်ပေါက်နံပတ် ၃ ကိုထွက်ပါ (အူတွမ်စု ဖထနစျေး)
3. အူတွမ်စု BTS ကိုဆင်းပြီးနောက် ပြန်ကွေ့ပြီးအူတွမ်စုလမ်းကိုသွားပါ
4. ရှေ့တည့်တည့်လမ်းလျှောက်လာပါက အူတွမ်စုလမ်းကိုတွေ့ပြီး ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့၍ အူတွမ်စုလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည် (စုခွမ်၀စ်103)
ဆေးခန်းသွားနည်းပုံစံ ၂ စုခွမ်၀စ်ကနေလိုင်းကားဖြင့်လာခြင်း -အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းအူတွမ်စုဌာနခွဲ
စုခွမ်၀စ်ကနေပြီးလိုင်းကားကနေလာရင် လိုင်းကားနံပတ် 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 139, 180, 507, 508, 511 လာရင်လိုင်းကားမှတ်တိုင် BTS အူတွမ်စုဆင်းပါ နောက်ပြီးအူတွမ်စုလမ်း(စုခွမ်၀စ် ၁၀၃) 400 မီတာလောက်ကိုဆက်လျောက်သွားရင်ဘယ်ဘက်တခြမ်းကဆေးခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည် ဆေးခန်းသို့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှ မီတာ ၄၀၀ အကွာအဝေးရှိပြီး ၅ မိနစ်လောက်ကြာပါမည်။
1. လိုင်းကားမှတ်တိုင်အူတွမ်စုBTS မှာဆင်းပါ
2. အူတွမ်စုသွားရန်ရှေ့တည့်တည့်သွားပါ (စုခွမ်၀စ်103)
3. အဲ့ပြီးနောက်အူတွမ်စုသွားရန်လမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည် ဆက်ပြီးအူတွမ်စုလမ်း (စုခွမ်၀စ်103) သွားရန်ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါ
4. ဆက်ပြီး၄၀၀မီတာလောက်ဆက်လျောက်လာပါ အဲ့ပြီးဆေးခန်းကိုးဘယ်ဘက်တခြမ်းမှာတွေ့လိမ့်သည်၊၎င်းသည်အူတွမ်စုစွယ်8ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိပါမည်
ဆေးခန်းသွားနည်းပုံစံ ၃ စီးခွမ်းစိလိနခလင်မီနီဘတ်ဖြင့်သွားခြင်း -အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းအူတွမ်စုဌာနခွဲ
စိနခလင်ကနေလာရင် BTS အူတွမ်စု-စီးခွမ်း-ဖာလာဂွမ်ကမီနီဘတ်ကိုတက်လာပြီး အူတွမ်စုစွယ်၃မှာဆင်းပါ အဲ့ပြီးနောက်၆၀မီတာလောက်ရှေ့တည့်တည့်ကိုလျှောက်လာပါ ဆေးခန်းကိုဘယ်ဘက်တခြမ်းမှာတွေ့လိမ့်မည် ၁၅မိနစ်လောက်ကြာပါမည်
1. BTSအူတွမ်စု-စိခွမ်-ဖာလာဂွမ်ဘက်ကမီနီဘတ်ကိုတက်ပြီး အူတွမ်စုစွယ်၃မှာဆင်းပါ
2. အဲ့ကနေပြီး၆၀မီတာလောက်ရှေ့တည့်တည့်လျှောက်လာရင် ဆေးခန်းကိုဘယ်ဘက်တခြမ်းမှာတွေ့လိမ့်မည်
ဆေးခန်းသွားနည်းပုံစံ ၄ စုခွမ်၀စ်လမ်းကနေပြီးကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့်လာခြင်း - အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းအူတွမ်စုဌာနခွဲ
စုခွမ်၀စ်လမ်းကနေလာပြီး အူတွမ်စုလမ်း(စုခွမ်၀စ်103)သွားရန်ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါ ၄၀၀မီတာလောက်ရှေ့တည့်တည့်လာပြီး ဆေးခန်းကိုဘယ်ဘက်တခြမ်းမှာတွေ့လိမ့်မည် အူတွမ်စုစွယ်၈ ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိလိမ့်မည်၊ကားကိုလမ်းဘေးမှာရပ်နိုင်ပြီး သို့မဟုတ် ကားအပ်တဲ့နေရာမှာသွားအပ်နိုင်ပါသည် (တစ်နာရီ ၂၀ ဘတ်_)
1. စုခွမ်၀စ်လမ်းကနေပြီးအူတွမ်စုလမ်း (စုခွမ်၀စ်စွယ်103) ကိုသွားပါ
2. နောက်ပြီးအူတွမ်စုလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည်သွားဖို့ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါ (စုခွမ်၀စ်103)